YaST YaST (Yet another Setup Tool ) သည် လင်းနပ်စ်စက်လည်ပတ်မှုစနစ် (Linux OS) ၏ အသွင်အပြင်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရဲနှောင်း ၊ ပန်းချီဆရာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ကိုစိုးမိုးနိုင်၊ ကိုရဲမာန်(ယခု ကာတွန်း ဝလုံး)၊ ဇာမင်းထိုက်တို့နှင့် အတူ အရပ်လေးမျက်နှာ အမည်ဖြင့် ပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ဇင်မင်းထွန်းနှင့် အတူ Duet အမည်ဖြင့်ပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Second Duet ပြပွဲ၊ Another Seven ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။
ဆေးဝါးဗေဒ 46. Atenolol = (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါ ထခြင်း၊ 50 mg 10 minutes after the last (IV) dose followed by another 50 mg 12 hours later. Then, 100 mg OD or 50 mg BD for another6to9days or until discharge from the hospital နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ 50 mg OD သွေးတိုးကျဆေး၊ = 50 mg, 100 mg; နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊5mg IV or 50-100 mg Oral Daily
ရှိန်းကျိန့်မြို့ There is another railway station located in Nanshan District, Shenzhen West (Shenzhen Xi), which is used forasmall number of long distance trains, such as the one to Hefei.